Am-polo Taonany ny Demaokrasian’i Arzantina, Nahoana No Mbola Mitohy Ny Fanjavonan’Olona? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Aogositra 2015 6:32 GMT
Vakio amin'ny teny English, čeština , Deutsch, Română , русский, عربي, Español
Hosodoko amin'ny rindrina ao Buenos Aires ao Susana Trimarco, ny renin'i Marita Verón, tovovavy 23 taona nanjavona teo am-pelatanan'ny tambajotra mpanondrana olona tao an-tanàna Arzantina ao Tucumán tamin'ny volana Aprily 2002. Sary nalaina tao amin'ny kaonty Flickr an'i PixelBeat! Zon'ny mpamorona, Creative Commons license.
Ho an'ny maro ao Arzantina, mampatsiahy mazava ireo olona nampanjavonina tamin'ny vanim-potoanan'ny didy jadona 1976-1983 ny mariky ny “olona tsy hita popoka”. Na dia teo aza ny 32 taonan'ny demokrasia, olona an'arivony-indrindra fa ny vehivavy sy ny tovovavy no mbola tsy hita popoka ao Arzantina.
Araka ny filazan'ny UNICEF sy ny Ministeran'ny Fitsarana, Fiarovana sy ny Zon'olombelona ao Arzantina, maherin'ny 4000 ireo olona nanjary niharan'ny fivarotana andevo isan-taona. Fomba iray amin'ny fivarotana ny fakàna an-keriny, izay matetika mikendry ireo tovovavy sy vehivavy, ary koa tovolahy izay arotsaka ao anatin'ny tontolon'ny fivarotan-tena;
Mikasika ny fakàna an-keriny tovolahy sy tovovavy ary tanora izany, izay avy eo terena ho lasa andevo tsy mizaka ny zony rehetra, [ary] lasa kilalaon'olon-kafa izay manara-maso ny fihetsik'izy ireo sy ny fiainan'izy ireo manontolo.
Tamin'ny 2006, nampihatra ny Lalàna manohitra ny fanondranana olona i Arzantina (Lalàna 26.364), ary tamin'ny volana Jona 2015, olona 8.151 lasibatry ny fanondranana no avotra noho ity lalàna ity, araka ny voalazan'ny manampahefana.
Na dia mety hoe tsy zava-baovao aza ny ny fanondranana olona, nalaza tamin'ny fampahalalam-baovao izany noho ilay tantaran'i Marita Verón, tovovavy ny 23 nanjavona tao an-tanànan'i Tucumán tamin'ny volana Aprily 2002. Voalaza fa nisy naka an-keriny izy ary nalefa niasa ho mpivaro-tena tao avaratra atsinanan'i Arzantina. Noho ny tsahotsaho fa miara-miasa amin'ireo tambajotram-panondranana olona ny polisy sy ny mpanao politika ao an-toerana dia tsy nitandro hasasarana nitady ilay tovovavy ny reniny, Susana Trimarco.
Telo ambin'ny folo taona izay no lasa raha nanjavona i Marita ary mbola tsy hita izy. Tamin'ny fikarohana azy, nihaona tamin'ny fianakavian'ireo tanora hafa lasibatry ny fakàna an-keriny afa-nandositra teo am-pelantanan'ireo mpamabo i Susana. Izy no nitarika ny fahatsapana fa tsy tranga maningana ny tantaran'ny zanany vavy, ary misy ireo tambajotran'ny fivarotan-tena avy amin'ny fakàna an-keriny manokana sy ny fanondranana vehivavy, maro amin'izany no mahazo fanohanana ara-politika sy avy amin'ny polisy. Rehefa nahafantatra izany i Susana dia nanoka-tena hiady amin'ny fanondranana ary nanangana ny Fundación María de los Ángeles, vondrona mandray tatitra momba ireo olona tsy hita ary manome fanohanana sy torohevitra ho an'ny fianakavian'ireo lasibatra.
Nahasarika ny vahoaka ny raharaha Verón noho ny Vidas Robadas, , tantara mitohy tao amin'ny fahitalavitra-pirenena Telefé tamin'ny taona 2008, izay niantso ny fiarahamonim-pirenena hitambatra mba hiady indray amin'ny fakàna an-keriny. Tsy ity ihany anefa ny ezaka fanentanana ara-tsosialy mikasika ny raharaha. Nanampy tamin'ny fanentanana manoloana ny fanondranana olona ao Arzantina ihany koa ireo mpamokatra horonantsary sy mpanakanto maro. Ohatra, mampiseho ny fomba fijery manerantany mikasika ny lohahevitra ny horontsary fanadihadiana Mujeres en Venta (Vehivavy Amidy). Mizara ny fijoroana vavolombelona mahavaky fo avy amin'ireo niharan-doza, sy mampiseho ireo manam-pahaizana miresaka ny fomba “fandraisana mpiasa” sy ny “tsy fanomezan-jo” ataon'ireo tambajotram-panondranana olona ny fanadihadiana.
(Lahatsary amin'ny teny Espaniola)
Misy ihany koa ireo horonantsary noforonina izay miresaka momba ny lohahevira, tahaka ny horonantsary fohy novokarin'i Gustavo “oRni” Fernandez, Undercover: Human Trafficking, izay tsy nampoizina ny fiafaran'ny tantara
Tsy izany ihany, milaza ny tantaran'i Alma, tovovavy nalain'ny tambajotra mpanondrana olona an-keriny ny horonantsary fohy noforonina ALMA, izay tarihin'i Marcela Suppicich ary nambaran'ny Antenimiera Mpanao Lalàna ao amin'ny Tanàna Mizakatenan'i Buenos Aires ho “mahaliana ny fiarahamonina”
Mandritra izany, eo amin'ny tontolon'ny tantara an-tsary, mpanao gazety sady mpanao sariitatra Julieta Arroquy nampiasa ny olo-malazany Ofelia mba haneho fitoviana eo amin'ny fanjavonan'ireo vehivavy tahaka an'i Marita Verón, Florencia Penacchi, Érica Soriano, ary María Cash amin'ny fampanjavonana an-tery izay nitranga nandritra ny fitondrana jadona miaramila.
Toy izany koa, nisy ireo hetsika isan-karazany notontosaina tao amin'ny haino aman-jery sosialy ho fanentanana momba ireo lasibatra sy hanampiana amin'ny fampitsaharana ny fijalian'izy ireo:
Raha tsy misy mpanjifa, tsy misy ny fanondranana olona
Raha tsy misy mpanjifa, tsy misy fanondranana olona. ALEFASO MAIMAIM-POANA AMIN NY 145 NY TATITRA. ARZANTINA